Tartan Curiseedka Aw Jaamac ee Taariikhda 2018 – Garanuug
Home / Tartan / Tartan Curiseedka Aw Jaamac ee Taariikhda 2018
admin February 17, 2018	Tartan, Tartan-Curiseedka Aw Jaamac Leave a comment 11,592 Views
Tartankan waxaa loogu magacdaray taariikhyahankii weynaa ee Aw Jaamac Cumar Ciise- Alle ha u naxariisto e-, oo geeriyooday 6dii Janaayo 2014. Waa tartan sannadle ah, waxaana lagu tartamayaa curis taariikhda Soomaalida ku saabsan. Ka qaybqaadashadu waxa ay u furan tahay qof kasta oo Soomaali ah meel kasta ha joogo e.
Kasooqaybgale kastaa hal curis oo uu qoray ayaa uu soo gudbinayaa.
Curisku waa in uu u dhexeeyo 2000 ilaa 4000 oo erey oo ku saabsan mawduuc la xidhiidha taariikh Soomaaliyeed (eeg hoos).
Curisku waa in uu gudbinayaa farriin waayo-aragnimo iyo aqoon laga qaadan karo oo ku saabsan mawduuca uu ka hadlayo, sidii iyo intii ay doonto farriintaasi ha le’ekaato e.
Curiska waa in la soo gudbiyo ugu dambayn Axad, 30’ka Sibtambar 2018.
Fadlan soo raaci: magacaaga oo saddexan, magaalada iyo dalka aad ku sugan tahay, iyo telefoonkaaga.
Mawduucyadani waa tusaale ee khasab ma aha in iyaga lagu koobnaado:
Taariikhdii Islaamka ee Carriga Soomaalida.
Soomaalida iyo Imbaraadooriyadihii Adduunka— Dhaqan iyo Dhaqaalo.
Axmed Guray iyo Halgankiisi: Kumuu ahaa?
Saansaankii ka jiray gobolka ee sabab u ahaa kacdoonkii iyo jihaadkii Imaamka
Abaabulkiisii, Howlgalladiisii, guulihiisii iyo waayihii soo gebagebeeyay halgankiisii
Haddii uu Axmed Guray mar ku suntanaa astaan halgan oo Soomaalinimo iyo Muslimnimo, maxaa geyiga Soomaalida maanta aragtidaas iska beddelay?
Taariikhdii Xisbiga Somali Youth League (SYL)
Goorma ayaa la aasaasay?
Ulajeeddooyinkii loo aasaasay?
Maxaa musdambeed u ahaa curashada ururka?
Maxay ahaayeen istaraatiijiyaddii ay rabeen in ay ku xaqiijiyaan himilooyinkii ay astaysteen?
Taariikhdii la dirirka gumeystaha ee Koonfurta (tusaale: Biyamaal, Sheekh Aweys…)
Taariikhda magaalooyinkeenna xeeb iyo berriba.
$1000 (kun doollar).
FG: curisyada naloo soo gudbiyo dhammaantood waa aanu kaydinayaa, waxaana suuragal ah in aanu u adeegsanno dano waxbarasho, iyo inaan faafinno . Ka qaybqaadashada tartanku waxa ay ka dhigan tahay oggolaansho aad noo siisay adeegsiga curiska.
Beddelid (18 Ogos 2018)
Muddada oo ku koobnayd 31’ka Ogos 2018 ayaa la kordhiyey ilaa 30 Sibtambar 2018.
Previous Kaalinta 1: Haasaawihii Xooladhaqatada
March 30, 2017	202,302